‘बाहुबली’जस्तो ब्लक बस्टर फिल्म बनाउने निर्देशक राजामौलीको फिल्ममा आलियाले काम गर्ने पक्का ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
‘बाहुबली’जस्तो ब्लक बस्टर फिल्म बनाउने निर्देशक राजामौलीको फिल्ममा आलियाले काम गर्ने पक्का !
एजेन्सी- ‘बाहुबली’जस्तो ब्लक बस्टर फिल्म बनाउने निर्देशक एसएस राजामौलीले अफ्नो आगामी फिल्ममा आलिया भट्टलाई लिन चाहेका छन्।बाहुबली सिरिजपछि राजामौली आफ्नो फिल्म ‘आरआरआर’मा व्यस्त छन्। फिल्मको नाम अलि फरक छ। यो फिल्ममा रामचरण तेजा र एनटीआर जुनियर लिड रोलमा छन्। हिरोइन अहिलेसम्म फाइनल भएको छैन।
राजामौलीले आलियासँग करण जोहरमार्फत सम्पर्क गरेको बताइएको छ ।आलियालाई करणले बलिउडमा लन्च गरेका हुन्। करणका धेरै फिल्ममा आलियाले काम गरिसकेकी छन्। त्यसैले राजामौलीले आलियासँग करण जोहरमार्फत सम्पर्क गरेको बताइएको छ ।
‘आरआरआर’मा करण कोप्रोड्युसर पनि हुन्। त्यसैले करणले भनेको आलियाले मान्नेछिन् र राजामौलीको फिल्ममा देखिनेछिन्।। फिल्ममा अर्की हिरोइनका रूपममा किआरा आडवाणी ले अभिनय गर्ने बताइएको छ ।